Inona no atao hoe IDFA? | Martech Zone fanafohezan-teny
Martech Zone » fanafohezan-teny » Fanafohezana manomboka amin'ny I	» IDFA
IDFA no fanafohezana ny Identifier ho an'ny mpanao dokam-barotra.
famantarana fitaovana kisendrasendra omen'i Apple ho an'ny fitaovan'ny mpampiasa. Mampiasa an'io ny mpanao dokambarotra hanaraha-maso ny angon-drakitra mba ahafahany manatitra dokam-barotra namboarina. Miaraka amin'ny iOS 14, izany dia azo alefa amin'ny alàlan'ny fangatahana fidirana fa tsy amin'ny alàlan'ny default.